Habka Codsiga Dal-ku-galka Maraykanka
U-qalmitaanka fiisaha US
Dal-ku-galka Maraykanka ee Muwaadiniinta Ingiriiska
Fiisaha Mareykanka ee Muwaadiniinta Isbaanishka
Fiisaha Mareykanka ee Muwaadiniinta Faransiiska
Dal-ku-galka Maraykanka ee muwaadiniinta Talyaaniga
Dal-ku-galka Maraykanka ee Muwaadiniinta Japan
Fiisaha Mareykanka ee Muwaadiniinta Australia
Fiisaha Mareykanka ee Muwaadiniinta Boortaqiiska
Dal-ku-galka Maraykanka ee Muwaadiniinta Holland
MACLUUMAADKA fiisaha Mareykanka
Dulmarka Visa Online ee US
Codsiga fiisaha Ameerika
Socdaalka ganacsiga ee Maraykanka
Wax ku baro Maraykanka Visa Online
Shuruudaha Visa Online ee US
Talaabooyinka Xiga - Kadib US Visa Online
Waa inaad aragtaa New York
Waa in uu arko Seattle
Waa inaad aragto Los Angeles
Waa inaad aragtaa Chicago
Waa inaad aragto San Francisco
Waa inaad aragto Maui Hawaii
Waa inaad aragto San Diego
Waa in la arkaa Texas
Waa in la arkaa Las Vegas
Hagaha safarka ee Matxafyada ugu Fiican ee Maraykanka
Hagaha Socdaalka ee Madxafyada Caanka ah ee New York
Hagaha Socdaalka ee Jardiinooyinka Qaranka ee Caanka ah
Taariikhda Taalada Xoriyadda
Beerta Qaranka ee Grand Teton
Goobaha Filimka ugu sarreeya ee Maraykanka
Xuduudka dhulka ee Maraykanka ayaa dib u furay Canada iyo Mexico
Booqashada Kaliforniya ee Visa Online
Booqashada Hawaii ee Visa Online ee Maraykanka
Booqashada Las Vegas Visa Online ee Mareykanka
Habka Codsiga Online Visa ee US
US ESTA, ama Nidaamka Elektaroonigga ah ee Oggolaanshaha Safarka, waa dukumiintiyada safarka ee loo baahan yahay muwaadiniinta ESTA U-qalma (ama fiiso-ka-dhaaf). Codsashada ESTA waa hab fudud laakiin waxay qaadataa xoogaa diyaarin ah.
Fiisaha ESTA ee Mareykanka, ama Nidaamka Elektaroonigga Mareykanka ee Ogolaanshaha Safarka, waa dukumentiyo safar oo qasab ah oo loogu talagalay muwaadiniinta dalalka fiisaha laga dhaafay. Haddii aad tahay muwaadin waddan u qalma ESTA US waxaad u baahan doontaa Fiisaha ESTA ee Mareykanka waayo, shaqada laga fadhiisiyo or gaadiidka, ama dalxiis iyo dalxiis, ama ganacsi ujeedooyin.
Codsashada ESTA USA Visa waa geedi socod toos ah oo hannaanka oo dhan waxaa lagu buuxin karaa onlayn. Si kastaba ha ahaatee waa fikrad wanaagsan in la fahmo waxa lagama maarmaanka u ah shuruudaha ESTA US ka hor intaadan bilaabin hawsha. Si aad u codsato Visa -gaaga ESTA -da Mareykanka, waa inaad ku buuxisaa foomka dalabka ee degelkan, inaad siisaa baasaboor, shaqo iyo faahfaahinta safarka, oo aad ku bixisaa internetka.
Kahor intaadan dhammaystirin dalabkaaga ESTA US Visa, waxaad u baahan doontaa inaad haysato saddex (3) shay: cinwaan emayl sax ah, hab lagu bixiyo internetka (kaarka deynta ama kaarka amaahda ama PayPal) iyo ansax ah baasaboor.
Cinwaan emayl sax ah: Waxaad u baahan doontaa cinwaan iimayl oo sax ah si aad u codsato codsiga ESTA US Visa. Iyada oo qayb ka ah hannaanka arjiga, waxaa lagaa rabaa inaad bixiso cinwaanka emaylkaaga iyo dhammaan isgaarsiinta khuseeya arjigaaga waxaa lagu samayn doonaa emayl. Kadib markaad dhammaystirto dalabka ESTA -da Mareykanka, ESTA -gaaga Mareykanka waa inuu ku soo galaa iimaylkaaga 72 saacadood gudahood.
Foomka lacag bixinta ee internetka: Kadib markaad bixiso dhammaan faahfaahinta ku saabsan safarkaaga Mareykanka, waxaa lagaa rabaa inaad lacag ku bixiso internetka. Waxaan u isticmaalnaa albaabka lacag bixinta ee Secure PayPal si aan u socodsiino dhammaan lacagaha. Waxaad u baahan doontaa midkood Debit ama kaarka Deynta (Visa, Mastercard, UnionPay) ama koontada PayPal si aad lacagtaada u bixiso.
Baasaboor sharci ah: Waa inaad haysataa baasaboor shaqaynaya oo aan dhicin. Haddii aadan haysan baasaboor, markaa waa inaad isla markiiba dalbataa mar haddii codsiga ESTA USA Visa aan la dhammaystiri karin iyada oo aan la hayn macluumaadka baasaboorka. Xusuusnow in Visa -ga ESTA ee Mareykanka uu si toos ah oo elektaroonik ahaan ugu xiran yahay baasaboorkaaga.
Foomka Codsiga iyo Taageerada Luqadda
Si aad u bilowdo dalabkaaga, u gal www.us-visa-online.org oo guji Codso Online. Tani waxay kuu keeni doontaa ESTA Foomka Codsiga Fiisaha Mareykanka. Websaydhkani wuxuu taageero siiyaa luqado badan sida Faransiiska, Isbaanishka, Talyaaniga, dutch, Noorweey, Danish iyo inbadan. Xulo luqaddaada sida lagu muujiyey waxaadna arki kartaa foomka dalabka oo lagu turjumay afkaaga hooyo.
Haddii dhibaato kaa haysato buuxinta foomka dalabka, waxaa jira ilo badan oo la heli karo oo kaa caawin kara. Waxaa jira Su'aalaha Badiya La Weydiiyo bogga iyo shuruudaha guud ee US ESTA bogga. Haddii aad u baahan tahay wax caawimaad ah ama aad u baahan tahay wax caddeyn ah waa inaad la xiriirtaa annaga helpdesk taageero iyo hagid.
Waqtiga loo baahan yahay si loo dhammaystiro codsiga ESTA US Visa
Waxay caadi ahaan qaadataa 10-30 daqiiqo si loo dhammaystiro codsiga ESTA. Haddii aad diyaar u tahay dhammaan macluumaadka, waxay qaadan kartaa in ka yar 10 daqiiqo in lagu buuxiyo foomka oo lagu bixiyo lacagtaada. Maadaama ESTA US Visa ay tahay 100% hanaan onlayn ah, inta badan natiijooyinka dalabka ESTA ee Maraykanka waxaa lagu soo diraa 24 saacadood gudahood cinwaanka emailkaaga. Haddii aadan diyaar u ahayn dhammaan macluumaadka, waxay qaadan kartaa ilaa saacad in la dhammaystiro codsiga.
Su'aalaha Foomka Codsiga iyo Qaybaha
Waa kuwan su'aalaha iyo qaybaha foomka Codsiga Fiisaha ee ESTA US:
Magacyada / La Bixiyay
Wadanka uu ku dhashay
Taariikh Baasaboor Baasaboor
Taariikhda Dhaceysa Baasaboorka
Waagii hore waligaa ma ahayd muwaadin wadan kale? (ikhtiyaari)
Wadanka Dhalashada Hore (Ikhtiyaari)
Sideed ku heshay dhalashada hore (dhalashada, waalidka ama jinsiyadda)? (ikhtiyaari)
Laynka Cinwaanka Guriga 1
Khadka cinwaanka guriga 2 (ikhtiyaari)
Magaalada ama Magaalada
Gobol ama Gobol ama Degmo
Lambarka Boosta / ZIP
Dalka aad dagantahay
Lambarka Taleefoonka / Telefoonka
Faahfaahinta Goobta Xiriirka ee Mareykanka
Magaca Xiriirka oo buuxa
Khadka Cinwaanka Xiriirka 1
Khadka Cinwaanka Xiriirka 2
Faahfaahinta safarka iyo Shaqada
Ujeedada booqashada (dalxiis, safar ama ganacsi)
Taariikhda imaanshaha la filayo
Ma leedahay shaqo -bixiye hadda ama kii hore?
Loo -shaqeeyaha ama Magaca Shirkadda
Magaca Shaqada (ikhtiyaari)
Qadka Cinwaanka Loo -shaqeeyaha 1
Qadka Cinwaanka Loo -shaqeeyaha 2 (ikhtiyaari)
Magaalada ama Magaalada Shaqada
Gobolka ama Degmada Shaqada
Faahfaahinta xaq u yeelashada
Weligaa ma lagu qabtay ama laguu xukumay dembi sababay dhaawac culus oo hantiyeed, ama waxyeello weyn?
Weligaa ma jabisay sharci kasta oo la xiriira lahaanshaha, isticmaalka, ama qaybinta daroogada sharci darrada ah?
Miyaad raadineysaa inaad ku lug yeelato ama waligaa ma ku lug leedahay falal argagixiso, basaasnimo, kharbudaad, ama xasuuq?
Weligaa ma samaysay khiyaano ama si khaldan u sheeg naftaada ama dadka kale si aad u hesho, ama u caawiso dadka kale inay helaan, fiiso ama gelitaanka Mareykanka?
Miyaad hadda shaqo ka raadinaysaa Maraykanka ama hore ayaa lagaa shaqaalaysiiyay Maraykanka adiga oo aan oggolaansho hore ka haysan dawladda Maraykanka?
Weligaa ma laguu diiday fiiso Maraykan ah oo aad ku codsatay baasaboorkaaga hadda ama kii hore, ama ma laguu diiday in laguu oggolaado Maraykanka ama ma ka noqotay codsigaagii gelitaanka dekadda Maraykanka?
Weligaa ma joogtay Mareykanka in ka badan muddada oggolaanshaha ee ay ku siisay dowladda Mareykanka?
Miyaad u safartay, ama ma joogtay Iiraan, Ciraaq, Liibiya, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya ama Yemen bishii Maarso 1, 2011?
Ma qabtaa jirro maskaxeed ama maskaxeed; ama ma tahay maandooriye ku xadgudbay ama qabatimay; ama hadda ma qabtaa mid ka mid ah cudurada soo socda: Daacuun, Gawracato, Qaaxada faafa, Belaayada, Furuqa, Qandhada Jaalaha ah?
Gelitaanka macluumaadka baasaboorka
Waa lama huraan in si sax ah loo galo Lambarka Baasaboorka iyo Bixinta Dalka Baasaboorka maadaama codsigaaga Visa -ga ESTA ee Mareykanka uu si toos ah ugu xiran yahay baasaboorkaaga waana inaad ku safarto baasaboorkan.
Fiiri bogga macluumaadka baasaboorka oo geli lambarka baasaboorka ee dusha sare ee boggan
Lambarada baasaboorka ayaa u badan 8 ilaa 11 xaraf. Haddii aad gelayso lambar aad u gaaban ama aad u dheer ama ka baxsan xayndaabkan, waxay u egtahay inaad gasho lambar khaldan.
Lambarada baasaboorku waa alifbeetooyin iyo tirooyin isku jira, sidaa darteed aad uga taxaddar xarafka O iyo lambarka 0, xarafka I iyo lambarka 1.
Lambarada baasaboorka waa inaysan waligood ku jirin xuruuf gaar ah sida xarig ama meelo bannaan.
Bixinta Dalka Baasaboorka
Xulo koodhka waddanka ee si sax ah loogu muujiyey bogga macluumaadka baasaboorka.
Si aad u ogaato waddanka raadi "Xeerka" ama "Dalka Bixiya" ama "Maamulka"
Haddii macluumaadka baasaboorka viz. lambarka baasaboorka ama lambarka waddanku kuma qaldana codsiga ESTA US Visa, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad raacdo duulimaadkaaga Mareykanka.
Waxaad ka ogaan kartaa oo keliya garoonka diyaaradaha haddii aad khalad samaysay.
Waxaad u baahan doontaa inaad dib ugu codsato ESTA US Visa garoonka diyaaradaha.
Waxaa laga yaabaa inaysan suurtogal ahayn in la helo US ESTA daqiiqadii ugu dambaysay waxayna qaadan kartaa ilaa 3 maalmood xaaladaha qaarkood.
Maxaa dhacaya ka dib bixinta Lacag bixinta
Markaad dhammaystirto bogga Foomka Codsiga, waxaa lagaa codsan doonaa inaad lacag bixiso. Dhammaan lacag -bixinta waxaa lagu socodsiiyaa albaabka lacag -bixinta ee Secure PayPal. Marka lacag -bixintaadu dhammaato, waa inaad ku heshaa Visa -kaaga ESTA -da Mareykanka sanduuqa emaylkaaga 72 saacadood gudahood.
Talaabooyinka Xiga: Ka dib markaad codsato oo aad lacag bixiso ESTA US Visa
Fadlan codso ESTA US Visa 72 saacadood kahor duulimaadkaaga.
Codsiga Visa Mareykanka
CODSIGA VISA US
US VISA ONLINEKA WADAMADA U QARAN
HABKA CODSIGA VISA VISA
SHURUUDAHA VISA ONLINEKA AH
SAFAR GANACSIGA OO NOOGU SOO GAARAY VISA ONLINE AH
WAX KA BARO USA VISA ONLINE AH
KADIB VISA INTERNETKA- TALAABOOYINKA XIGA
HAGAHA MUSSEUMYADA UGU FIICAN MARAYKANKA
MUSEUMSKII CAANKA AH EE YORK CUSUB
TILMAAMAHA BARAKOOYINKA QARANKA CAANKA AH
HAGAHA Taallada Xoriyadda
XARUNTA MAWDUUCA UGU FIICAN EE USA
GOOBAHA FILIMKA UGU SAREEYA EE USA
WAA IN AAD aragtaa YORK CUSUB
WAA INAAD arag SEATTLE
WAA IN LA ARAG LOS ANGELES
WAA INAAD aragto CHICAGO
WAA INAAD aragtaa SAN FRANCISCO
WAA INAAD aragtaa MAUI HAWAII
WAA IN ARAG SAN DIEGO
WAA IN ARAG TEXAS
Xuquuqda daabacaadda waxaa leh www.us-visa-online.org
Afeef: VISA-ka elegtarooniga ah ee US oo ay bixiso mareegahan ganacsi waxa si toos ah looga codsadaa websaydka Kastamka iyo Ilaalinta Xuduudka ee Maraykanka. Kastamyada iyo Ilaalinta Xuduudaha (CBP) uma magacaabin www.us-visa-online.org si toos ah, si dadban ama si gaar ah. Lacag xirfadle ah ayaa laga qaadayaa adeegyadayada iyo Canshuurta Dal-ku-galka Dawladda ee kuwa ka codsada mareegahan.